Torohevitra momba ny varotra varotra avy amin'ny birao an-trano | Martech Zone
Alakamisy 26 martsa 2020 Talata, Martsa 2, 2021 Douglas Karr
Miaraka amin'ny krizy ankehitriny, ireo matihanina orinasa dia mahita fa mitoka-monina sy miasa ao an-trano, miankina amin'ny paikadin'ny horonantsary hanaovana kaonferansa, antso am-barotra ary fivorian'ny ekipa
Manokana ny tenako mandritra ny herinandro aho izao satria ny namako iray dia sendra olona iray izay nanaporofo tsara fa COVID-19, ka dia nanapa-kevitra ny hametraka toro-hevitra vitsivitsy aho mba hanampiana anao hampiasa tsara kokoa ny horonan-tsary ho fampitaovana ifandraisanao.
Torohevitra momba ny horonan-tsary an'ny birao an-trano
Miaraka amin'ny tsy fahazoana antoka eo amin'ny toekarena dia tsy maintsy miombom-pihetseham-po amin'ireo fanambin'ny mpanjifa rehetra ianao. Tokony ho loharanom-panampiana azo antoka ho an'ny mpanjifa sy mpanjifa rehetra ianao. Ny paikady maharitra dia tsy raharahian'ny ankamaroany satria mihotakotaka sy mieritreritra paikady ny orinasa. Ny vidéo dia fitaovana iray handresena ny sasany amin'ireo fanamby lavitra ananantsika amin'ny fifandraisan'olombelona, ​​fa tokony hanatsara izany traikefa izany ihany koa ianao.
Ho an'ny horonantsary, mila fisainana ianao, ny lozisialy, ny paikadin'ny fandefasan-kafatra ary ny sehatra hanamafisana ny fandraisan'anjaran'ny hafatrao.
Ny fitokana-monina, ny adin-tsaina ary ny tsy fahatokisana dia mety hisy fiatraikany amin'ny fomba fahitana antsika. Ireto misy zavatra azonao atao hanatsarana ny fomba fisainanao manokana ary koa ny fomba fahitan'ny mpijery anao azy.
fankasitrahana - Alohan'ny handehananao amin'ny horonantsary dia misaintsaina ny zavatra ankasitrahanao.
fanatanjahan-tena - Tsy miasa intsony izahay. Miezaha hanadio ny lohanao, hanafoana ny adin-tsaina ary hanangana endorphins.
Akanjo ho amin'ny fahombiazana – Fotoana izao handroana, hanaratra sy hanaovana fitafiana hahombiazana. Hahatonga anao hahatoky tena bebe kokoa izany ary hanana fahatsapana lehibe koa ny mpandray anao.
Scene - Aza mijoro eo alohan'ny rindrina fotsy. Ny birao misy loko lalina sy misy etỳ an-tany any aorianao dia ho manasa kokoa amin'ny jiro mafana.
Ahenao kely ny olana atrehinao amin'ny kalitaon'ny feo, kalitaon'ny horonan-tsary, fikorontanana ary olana amin'ny fifandraisana. Zahao hoe ny biraoko an-trano mba hahitako izay novidiko vola sy ny fomba fiasan'izy rehetra.
Hardwire - Aza miantehitra amin'ny Wifi amin'ny horonan-tsary sy feo, mampandeha tariby vonjimaika avy amin'ny router mankany amin'ny solosainao findainy.
feo - Aza mampiasa mpandahateny ivelany hihainoana, hampiasa earbuds.üAudio - Feo manan-danja ny feo, makà mikrophone tsara na ampiasao ny mikrôfanao headset hampihenana ny tabataba ao ambadika.
Miaina & mamelatra - Mampiasà fofona diaphragmatic alohan'ny horonan-tsarinao mba tsy ho mosarena oksizenina ianao. Ahinjiro ny lohanao sy ny hatokao alohan'ny hanombohana.
Eye Contact - Apetraho amin'ny fari-maso na mihoatra ny haavon'ny masonao ny fakantsarinao ary jereo ny fakantsary manerana anao.
fikorontanana - Vonoy ny telefaona amin'ny telefaona sy ny birao anao.
Paikadin'ny fifandraisana amin'ny horonantsary momba ny fandraharahana
Ny horonan-tsary dia fitaovana matanjaka, saingy mila mampiasa azy io ianao amin'ny tanjany mba hahafahanao manana ny vokany lehibe indrindra.
fohy- Aza lany andro amin'ny olona. Ampiharo izay holazainao ary tongava mivantana amin'ilay hevitra.
fiaraha-miory - Ny tsy fahalalana ny toe-javatra manokana ananan'ny mpijery anao dia azonao atao ny manalavitra ny vazivazy.
Mizara loharano - raha mila fanazavana fanampiny izay ahafahan'ny mpijery anao mandini-tena lalindalina kokoa.
Fanolorana fanampiana - Omeo ny fotoana mety hanarahan'ny prospect anao na ny mpanjifanao. Tsy fivarotana izany!
Karazan'ireo sehatra video
Sehatra Webinar, fihaonambe ary fihaonana - Zoom, Uberconference, ary Google Hangouts dia rindrambaiko fihaonambe tsara avokoa ho an'ny 1: 1 na 1: Fivoriana maro. Izy ireo koa dia azo soratana sy avoakan'ny mpihaino marobe.
Sehatra mivantana amin'ny haino aman-jery sosialy - Facebook sy Youtube Live dia sehatra video mahafinaritra mahafinaritra hizarana amin'ny mpihaino marobe.
Sehatra horonantsary varotra sy mailaka - Loom, Dubb, BombBomb, Covideo, OneMob ahafahanao manoratra mialoha miaraka amin'ny fakan-tsary sy fakan-tsarinao. Mandefasa sary mihetsika amin'ny mailaka, mahazo fampandrenesana ary ampidiro amin'ny CRM anao.
Video Hosting - Youtube no mbola motera fikarohana lehibe indrindra faharoa! Apetraho eo izy ary manatsara azy. Vimeo, Wistia, ary sehatra fandraharahana hafa dia miavaka ihany koa.
Social Media - LinkedIn, Twitter, Instagram dia mamela anao hampiasa ny fantsona sosialinao rehetra hizara sy hampiroborobo ireo horonan-tsary amin'ny endriny niaviany. Tandremo fa ny sehatra tsirairay dia misy fetra amin'ny halavan'ny horonan-tsarinao.
Manantena aho fa manome fanampiana ireo rehefa miasa amin'ny horonantsary avy an-trano amin'ity krizy ity ianao!
Tags: google hangoutsbiraon'ny tokantranoMarketing Webinarvideo conferencesary an-tsaina amin'ny horonan-tsarysehatra videopaikadin'ny horonantsarytorohevitra amin'ny videofika amin'ny video